Kỹ thuật bón phân và chọn phân bón cho cây cảnh trong nhà | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Kỹ thuật bón phân và chọn phân bón cho cây cảnh trong nhà | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Kỹ thuật bón phân và chọn phân bón cho cây cảnh trong nhà | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Imfuno yokukhula kunye nokunyamekela izityalo zangaphakathi iye yanda kumaxesha akutshanje. Umbuzo omkhulu yindlela yokukhetha kunye nokuchumisa izityalo ukuze zincede zikhule kwaye zikhule kakuhle. Ngenxa yokuba ukuchumisa kunendima ebaluleke kakhulu, kuya kongeza izondlo, kudala iimeko zezityalo ukuba zikhule iingcambu eziqinileyo, amagqabi aluhlaza kunye neentyatyambo ezintle. Ukuba ufunda malunga nezichumisi kunye nobuchule bokuchumisa izityalo zangaphakathi, funda inqaku elingezantsi!
1 Izichumisi zezityalo zangaphakathi
1.1 Ukunyibilika kancinane kwesichumiso esiphilayo
1.2 Izichumisi zokunyibilika kancinane
1.3 Kuza kuchunyiswa nini izityalo zasendlini?
1.3.1 Umgaqo 1: Ubungakanani obuncinci, amaxesha amaninzi okusetyenziswa
1.3.2 Umthetho 2: Ungaze uchumise izityalo ezibuthathaka
1.3.3 Umthetho 3: Akukho fomula yendalo yonke kuzo zonke izityalo
2 Ezinye izichumisi ezilungileyo zezityalo zangaphakathi:
2.0.1 Umgquba weentshulube Sfarm
2.0.2 Umgquba wenkomo weTropical microbial eziphilayo
2.0.3 Laforge Micronutrients
2.1 Ukunyibilika okucothayo kwesichumiso se-organic Savia Jord
2.1.0.0.1 Umgquba weentshulube SFARM PB01 – 2kg, 5kg, 10kg
2.1.0.0.2 I-Vermicompost I-P pellets ichumisa ii-orchids kunye nezityalo ezifakwe kwiimbiza
3 I-Vermicompost I-P pellets ichumisa ii-orchids kunye nezityalo ezifakwe kwiimbiza
3.0.0.0.1 Laforge Micronutrients
3.0.0.0.2 Ikeyiki yeOyile ecocekileyo yeNeem
3.0.0.0.3 Organic Humic Banana Juice
3.0.0.0.4 OCT Tropical Premium organic umgquba wenkomo
3.1 Tropical Premium microbial organic umgquba wenkomo
3.1.0.0.1 Iimveliso ze-Trichoderma
3.1.0.0.2 Ukunyibilika okucothayo kwesichumiso se-organic Savia Jord
3.1.0.0.3 Isichumisi se-NPK esine-micronutrients NPK 20-20-15 + TE
3.1.0.0.4 I-NPK yokongeza isichumiso nge-NPK 16-16-8+13S
Izichumisi zezityalo zangaphakathi
Iindidi zamaxabiso kunye neentlobo zezichumisi kwimarike zenza abalimi babhideke xa bekhetha. Loluphi uhlobo endifanele ukuluthenga? Ngaba ixabiso elincinci lisemgangathweni olungileyo? Ngaba kuyasebenza ukuchumisa izityalo zangaphakathi? Kuphi ukuthenga udumo? Nazi ezinye izichumisi ezisetyenziswa rhoqo kwizityalo zangaphakathi:
Izichumisi ezilulwelo zizichumisi ezingamanzi. Esi sichumiso sihlala sixutywa namanzi ukunkcenkceshela izityalo. Esi sisichumiso esinyibilikayo, esifunxwa lula zizityalo. Ngokuqhelekileyo, izichumisi ezisekelwe emanzini zisetyenziswa rhoqo kwiiveki ezi-2.
Ezinye zezichumiso ezibalaseleyo zolwelo kwimarike ziquka:
Organic Humic Banana Juice
S-AMIN Premium Nutrition
Esi sisichumiso sesintu sokuchumisa izityalo. Zingafakwa umgquba njenge ubulongwe benkomo, umgquba, okanye ezinye iintlobo zomgquba ovela kwinkunkuma yasekhitshini. Inzuzo enkulu yolu hlobo kukubunjwa kwezondlo ezahlukeneyo, imfuneko encinci yokongeza ezinye izichumisi. Ngaphezu koko, ikwimo ye-humus, ngoko ibonelela ngezinto eziphilayo emhlabeni, inceda ukuphucula umhlaba.
Into ekufuneka uyikhumbule xa usebenzisa izichumisi ze-humus kwizityalo zangaphakathi yi-dosage. Isichumisi kufuneka sigalelwe kanye ngenyanga kunye nesixa ngokwemiyalelo ekwipakethe yemveliso. Kuphephe ukuchumisa kakhulu, okubangela ubushushu kunye neengcambu ezivuthayo.
Ukunyibilika kancinane kwesichumiso esiphilayo
Esi sisichumiso esinezithako eziphilayo ezicinezelwe kwiipellets ukuze zincede zikhuphe izondlo ngokucothayo. Olu hlobo lwesichumisi luyathandwa ngenxa yokuba lula, ukusetyenziswa lula kunye nokulawulwa kwedosi elula. Ngaphezu koko, ngenxa yokukhululwa kwayo kancinci, akunakwenzeka ukuba ibangele ukutshisa kweengcambu. Ezinye izichumisi eziphilayo ezicetyiswayo ezikhutshwa kancinci ziquka:
IKeyiki yeOyile ecocekileyo yeNeem
Ukunyibilika okucothayo kwesichumiso se-organic Savia Jord
Izichumisi zokunyibilika kancinane
Izichumisi ezikhutshwa kancinci ziza kwiintlobo ezininzi, kubandakanywa izikhonkwane, iipod, kunye ne-capsules. Zine-mulch ekhulula ixesha elivumela izondlo ukuba zingene kancinci emhlabeni.
Esi sichumiso sisebenza ngcono kwiimbiza ezincinci kuba akufuneki ube nexhala malunga nokuhanjiswa kwezondlo kuba kukho indawo yokugquma encinci. Nangona kunjalo, izichumisi ze-inorganic zihlala ziqulethe kuphela i-NPK organic components kodwa aziqulathanga iiminerali ezinje ngeCa, Fe, Mg, njl njl. Ekuhambeni kwexesha, ayiyi kulinganisa inkqubo yesondlo kunye nemvelaphi ye-organic yelo xabiso. Ukoyisa, kuyimfuneko ukongeza i-humus okanye izichumisi zamanzi.
Isichumiso se-NPK sezityalo zokuhombisa siyacetyiswa:
Isichumisi se-NPK esine-micronutrients NPK 20-20-15 + TE
I-NPK yokongeza isichumiso nge-NPK 16-16-8+13S
Kuza kuchunyiswa nini izityalo zasendlini?
Nangona izityalo zangaphakathi zingabonakali ngokuthe ngqo kwizinto ezisingqongileyo zangaphandle, ziyakwazi ukukubona ukutshintsha kwelanga kunye nokuza kwentwasahlobo.
Kodwa uninzi lwezityalo zasendlini zihlala zilele okanye zilele kancinci ngexesha lonyaka. Isityalo asifuni sichumisi ngeli xesha. Ukuchumisa ngeli xesha kunokukhokelela ekukhuleni okubuthathaka. Kwaye yenza ukuba isityalo sichaphazeleke ngakumbi kwizifo kunye nomonakalo wezinambuzane.
Kwizityalo ezisanda kuthengwa okanye i-substrates entsha akufanele ifakwe ngokukhawuleza, malunga nenyanga eyi-1 emva kokuba sichumisa. Ngenxa yokuba umxube wokubumba wesityalo nawo uqulethe isixa esongezelelweyo sesichumiso ukuze isityalo sisebenzise ixesha elithile.
Umgaqo 1: Ubungakanani obuncinci, amaxesha amaninzi okusetyenziswa
Xa uqala isichumisi esitsha, musa ukusebenzisa imali ecetyiswayo kwiphakheji. Idosi ekwileyibhile idla ngokumela ubuninzi besixa sesichumiso esinokuthi sinyamezele isityalo esisempilweni esikhula phantsi kweemeko ezifanelekileyo. Nangona kunjalo, ngezityalo zangaphakathi, zifuna inani elincinci lesichumisi. Kucetyiswa ukuba uvavanye ngesixa esincinci sesichumiso (malunga ne-1/2 isixa esicetyiswayo) kwaye ujonge impendulo yesityalo. Emva koko uqhubeke ulungelelanisa umxholo.
Ngenxa yokuba izityalo zangaphakathi aziyi kuthatha izixa ezikhulu zesichumisi. Ukuba isityalo asinakukhanya kunye nokufuma, asidibanisi isichumiso ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, isichumisi siya kuba sigqithise kwaye siqokelele kumxube kwityuwa, echaphazela kakubi izityalo.
Umthetho 2: Ungaze uchumise izityalo ezibuthathaka
Xa isityalo sikhubazekile, njengokulunywa sisinambuzane okanye yifungus ebangela isifo. Okanye xa isityalo sisothukile ngenxa yokunyakaza kunye nokulimala kweengcambu, akufanele kuchunyiswe. Lindela de amagqabi amatsha anempilo avele okanye xa ubona iimpawu ezicacileyo zokubuyisela, emva koko uqhubeke nokuchumisa isityalo.
Umthetho 3: Akukho fomula yendalo yonke kuzo zonke izityalo
Isityalo ngasinye sidinga isixa esahlukileyo sesichumiso ngokuxhomekeke kwinqanaba lokukhula kwaso. Izityalo ekudubuleni nasekuqhameni zifuna isichumisi esingaphezulu kunezinye izigaba.
Logama nje uqinisekisa ukuba isichumiso sinolungelelwano kwaye sinengqiqo, ukuchumisa kuba lula.
Ezinye izichumisi ezilungileyo zezityalo zangaphakathi:
Umgquba weentshulube Sfarm
Umgquba: Utyebile kwi-humus ukunceda ukuphucula umhlaba, kunye neentlobo ngeentlobo ze-micronutrients. Olu hlobo lwesichumisi luyathandwa kukunganuki kwaso, akutshisi, okungatshiyo xa kufakwe kwizityalo. Uphawu oludumileyo lwevermicompost yiSfarm, ekulula ukuyifumana kwaye uyithenge kwizityalo zokuhombisa.
Umgquba wenkomo weTropical microbial eziphilayo
Ityebile kakhulu kwizondlo kunye ne-humus njenge-vermicompost. Kodwa abantu abaninzi banenkxalabo yokuba ubulongwe benkomo buhlala buba nevumba elimnandi, ubulongwe balo bunokubangela ukutsha kweengcambu ngokulula. Ukuyilungisa, kufuneka nje uthenge umgquba wenkomo okumgangatho ophezulu, onjengeTropical OCT microbiological organic cow manyolo kunye nomxholo ophezulu wesondlo, owenziwe ngobuchule bobuchwephesha baseJamani, ongenavumba kwaye awubangeli ubushushu kwizityalo.
Iqulethe zonke izondlo ezifunwa zizityalo ukunceda ukuphucula umhlaba, kuquka umhlaba kunye ne-ecosystem ejikelezileyo, kubandakanywa ne-microorganisms eziluncedo. Ukuxhasa izityalo ukuba zikhule kakuhle, ziphilile ukusuka kwiingcambu, zikhuthaze i-branching, iintyatyambo zihluma, zixhathise izinambuzane. Iimveliso ezihambelana nokusingqongileyo.
Sisichumisi esidumileyo sokunyibilika kancinci esenziwe eNorway kunye nemveliso enezinga eliphezulu labathengi abathengayo emva kokuyisebenzisa eGreen Balcony.
Imveliso inepropathi “yokukhululwa kancinane” kunye ne-organic coating ebola ngokuhamba kwexesha ukubonelela ngesondlo esihlala ixesha elide. I-organic core iqulethe izinto ezininzi zebhayoloji ezisebenzayo ezifana ne-humic acid, i-fulvic acid, njl., ukudala intsimi efanelekileyo yezinto eziphilayo ezixhamlayo kunye neengcambu zezityalo ukukhula. Ukuphucula isivuno kunye nokuxhathisa izityalo kwimbalela, izitshabalalisi kunye nezifo.
Umgquba weentshulube SFARM PB01 – 2kg, 5kg, 10kg
30,000 iphumelele – 100,000 yen
I-Sfarm vermicompost sisichumiso se-premium microbial organic esingenayo imichiza eyingozi.
Ukunciphisa ukufuma, ukungcola kwesikrini, i-ray egudileyo kulula ukuchumisa izityalo.
I-Vermicompost ifanelekile kuzo zonke iintlobo zezityalo. Isichumisi esilunge kakhulu kwisitiya semifuno esicocekileyo ekhaya.
Ubunzima: 2kg, 5kg kunye ne-10kg
I-Vermicompost I-P pellets ichumisa ii-orchids kunye nezityalo ezifakwe kwiimbiza
35,000 iphumelele – 42,000 iphumelele
Isichumiso siyanyibilika kancinane ukuqinisekisa ukuba izondlo emhlabeni zisoloko zanele kwaye umhlaba awuwohloki emva kokulinywa.
Igcina imveliso yomhlaba nge-organic matter kunye ne-humus
Iingcambu ezikhula ngokukhawuleza, ezinamandla zidala uthungelwano lokufunxa izondlo zeminerali kunye namanzi kwizityalo
Inceda izityalo ukuba zoyise imbalela, ukugcwala kwamanzi okanye iimeko zeqabaka
Inceda ukwahlula amahlumela esebe kunye ne-atrophy elungileyo ukudala isivuno esikhulu
Ukubonelela ngesondlo esilungeleleneyo kwinkqubo yokwenziwa kweentyatyambo kunye neziqhamo, ukunciphisa ilahleko yeziqhamo ezincinci kunye nembewu.
Ixhasa inkqubo yomzimba yokuzikhusela kwisityalo ngokuchasene nebhaktiriya eyingozi, iintsholongwane okanye umngundo
IMisa : 500g kunye ne-1 kg
Ikhonkco lokuthenga iimpahla kuMgangatho-Ukuthumela ngenqanawa ngokukhawuleza kwilizwe lonke
Nceda uphucule umhlaba kubandakanywa umhlaba kunye ne-ecosystem ejikelezileyo kuquka ii-microorganisms eziluncedo Ukubonelela ngezondlo ezaneleyo zezityalo, okwenza kube lula ukuba izityalo zifunxe.
Izityalo eziphilileyo ezisuka kwingcambu, zikhuthaza i-branching, iintyatyambo ezihlumayo, ezixhathisa izinambuzane kunye nezifo Ubuhlobo bendalo, azichaphazeli abantu kunye nokusingqongileyo.
Ngaba ububele isichumiso esiphilayo Yonke yendalo, evela kwisiqhamo se-neem esicinezelweyo kunye nembewu,
Inceda ekuphuculeni ukumila komhlaba, ukwandisa umthamo wokubamba amanzi, iphucula ukungena komoya womhlaba, inceda iingcambu zikhule ngcono.
Ukuvuselela kwandisa ukukhula kwamagqabi, iintyatyambo, kunceda iintyatyambo ziqhakaze ngakumbi nangakumbi.
Inguqulelo yebhanana eHumic
– Ngokuphindwe kabini umxholo we-potassium kunye ne-incubated phantsi kweeprobiotics ezikhethekileyo, kunceda ukwandisa ukuchasana kwe-roses kunye ne-orchids emva kokutyhefa ngezichumisi zeekhemikhali.
– Inceda izityalo zikhule iingcambu ezincinci, ezomeleleyo nezikhula ngokukhawuleza. Ukusuka apho, khulisa ukukhula kweeorchids kunye neerozi. Kunokuthiwa ukuguqulelwa kwebhanana ye-humic yi-panacea ye-orchids kunye neerozi.
Umthamo: 1 ilitha
OCT Tropical Premium organic umgquba wenkomo
Tropical Premium microbial organic umgquba wenkomo
Isityebi kwiprotheyini ngokutyebisa iinkomo zenkomo zase-Australia ezinomthamo ophezulu we-organic ukusuka kwi-Cargill bran, ingca ye-V06, umbona womntwana, …
Icutshungulwe ngokweteknoloji ye-OCT yesiJamani kunye namaxesha ama-2 okuhlolwa ngononophelo kwaye ifakwe kwi-60 – 70 degrees Celsius ukususa ukungcola, umngundo, iintsholongwane ze-pathogenic, ezithambileyo, ezigudileyo, ezingenavumba.
Iqulethe iiprobiotics zokunceda ukulungisa initrogen kunye nokunyibilikisa i-phosphorus engagayekiyo, okwenza kube lula ukuba izityalo zifunxe izondlo.
Ikhonkco lokuthenga iimveliso eShopee
I-TRICHODERMA – 10^9 cfu (> I-16 yeebhiliyoni zembewu) inosetyenziso oluninzi olufana noku:
✓ Quka iibhanana, amapayinapile, imifuno yasekhitshini. ..
✓ Ukufukama kweembotyi zesoya
✓ Fudumeza amaqokobhe, amabala ekofu
✓ Ukwenza umgquba weenkomo neenkukhu
✓ Khupha iingcambu
✓ Unyango lwemidiya phambi kokutyala.
75,000 iphumelele – I-165,000 iphumelele
– Isichumiso se-Organic sophulwa kancinci ukunceda izityalo zifunxe kakuhle kwaye ixesha elide.
– Ukutya okwaneleyo kunceda ukuvuselela ukukhula kweengcambu, ukuphucula umhlaba, ukuxhathisa izifo ezilungileyo, ukulingana, izityalo ezinempilo …
– Izakhamzimba zikhona ngendlela yeemolekyuli ezintsonkothileyo ezibanceda ukuba bangakhukuliswa xa benkcenkceshela okanye bedibana nemvula yokuqala yexesha lonyaka.
– Ifom yethebhulethi, encinci, ibola kakuhle, xa ichithwa, akukho mzimba owomileyo
Inkcazo: Iingxowa ze-2kg kunye ne-5kg
Isichumisi se-NPK esine-micronutrients NPK 20-20-15 + TE sisichumisi esiqulethe i-macronutrients NPK kunye ne-microelements TE (B, Zn) ukuxhasa isichumisi kwiintlobo ezininzi zezityalo zemifuno. :
– Imithi ichama ngokukhawuleza emva kokuthenwa nokugawulwa.
– Khuthaza iingcambu ezomeleleyo, ukukhula okunempilo, amasebe akhawulezayo kunye namagqabi.
Iveliswe ngokwemigangatho yaseKorea.
Isichumisi se-NPK esongezelelweyo i-NPK 16-16-8 + 13S ilungiselelwe ukusuka kwi-macronutrients edityaniswe ne-second factor (S) ngokwemigangatho yaseKorea ukunceda inkxaso:
– Inceda imithi ukuba iphile ngokukhawuleza emva kokuthenwa nokugawulwa.
– Ibonelela ngesondlo kwizityalo ezininzi, ngakumbi imifuno – iintyatyambo – izityalo zokuhombisa
Okwangoku, sithengisa iimveliso zomhlaba, izichumisi, imidiya kunye nezixhobo zokulima izityalo, iimbiza kunye neentlobo ezininzi zemithi ye-landscape. Ukuba uneminye imibuzo, nceda uqhagamshelane nathi ngoko nangoko Ibhalkhoni eluhlaza.
(028) 3784 0622 – 0931 601 472 (Nhu Mai)
✍ Idilesi: No. 20 Ngan Long Villa indawo, Nguyen Huu Tho isitrato, Phuoc Kien commune, Nha Be isithili – HCMC
Phân bón là gì? tại sao phải sử dụng phân bón? | Hatgiongtihon.net
Phân bò – Ban Công Xanh | Hatgiongtihon.net